मुक्तीनाथ मन्दिरको १०८ धाराहरुको रहस्यमय खुलाशा ! शुद्ध मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ ! – Khabar Silo
सूर्य, चन्द्रमा र शनिको गणनालाई ज्योतिषको गणनामा विशेष महत्त्व दिइन्छ। मानिसको जन्मकुण्डलीमा शनि अशुभ हुँदा उक्त मानिसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्या आउन सुरु हुन्छ। सबै ९ ग्रहहरु मध्ये शनि सबैभन्दा ढिला चाल चल्ने ग्रह हो। शनिलाई एक राशिबाट अर्को राशिमा गोचर हुनको लागि साढे दुई वर्ष लाग्छ। कुनै पनि राशिमा शनि अवस्थित छ भने उक्त […]